MAMPIRONGATRA NY ASAN-DAHALO : Misesy ny fisamborana ireo mpimasy mpiray tsikombakomba – Free News
samedi, 29 janvier 2022 - 1:35
Ampahany amin’ireo moara sarona tany amin’ny mpimasin-dahalo.
Accueil/Fanadihadiana Manokana/MAMPIRONGATRA NY ASAN-DAHALO : Misesy ny fisamborana ireo mpimasy mpiray tsikombakomba
Manao ranolava ny fanatraran’ny Zandary ireo mpimasin-dahalo tany amin’ny Faritra Ihorombe ka hatrany Menabe iny, nanomboka ny fiandohan’ny volana septambra no ho mankaty. Vao omaly indray, mbola tra-tehaka koa ny mpimasy iray, rehefa nahazo alalana tamin’ny Fitsarana ny mpitandro filaminana, nanao ny fisavana ny tranony, tany amin’ny faritanin’Antsiranana…
Rado Harivelo 10 septembre 2020
Tsy afa-misaraka amin’ny asan-dahalo ireo mpimasy mpamatsy ody azy ireo, amin’ny fanatanterahana ny asa ratsiny. Naiditra am-ponja afakomaly ny mpimasin-dahalo sady mpitahiry ireo omby avy nangalarin’ny dahalo, tao Andranomanitsy, Ankily, Ihosy sy Ihorombe. Raha ny fanadihadiana, angom-baovao tamin’ny mponina tany an-toerana no nahafantarana fa misy an’Ingahy Rakoto mpimasy mpiara-miasa amin’ny dahalo, mitazona omby maro halatra, sady tsy misy taratasy. Nidina nizaha ifotony haingana ireo zandary nanao ny fanamarinana, ny 4 septambra lasa teo. Vokany, tra-tehaka tao aminy ireo karazan’ody marobe sy omby miisa enina, izay tsy misy taratasy mazava. Rehefa natao ny famotorana, niaiky ny heloka vitany izy ary tsy fantany akory izay tena tompon’ny omby fa anjarany tamin’ireo fanafihana notontosain’ny dahalo ireo. Nandritra ny fanadihadiana koa no nanambarany fa famitahana ireo dahalo fotsiny ireo lazainy ho odigasy ireo fa tsy mandaitra akory. Nampidirina am-balam-pamonjana ireo omby mandra-pahita ny tompony sy ireo dahalo mpiray tendro amin’ity mpimasy ity. Ahitam-bokatra hatrany ny fanomezam-baovao avy amin’ny mponina, amin’ireo zandary.
Mpimasin-dahalo sarona tao Morondava…
Ilay mpimasy tra-tehaka niaraka tamin’ireo odiratsy marobe.
Voasambotra koa ny mpimasin-dahalo iray mpamatsy odiratsy ho an’ireo dahalo, ao anatin’ny Faritra Menabe iny, ny afakomaly tolakandro teo, tao Belalanda, Analaiva, ao anatin’ny distrikan’i Morondava. Tsy tako-nafenina fa ireo atao hoe “Mpimasin-dahalo” ireo no tompon’antoka sy mampirisika ireo dahalo ireo hanatontosa ny asa ratsiny, ary tsy mitsitsy mihitsy amin’ny fanafihana ataony. Loharanom-baovao marim-pototra avy amin’olona tsara sitrapo no nahafantarana fa niorim-ponenana ao Belalanda Ingahy Tefinanahary mpimasy avy any Beroroha, mba hamatsy mohara ireo jiolahy sy dahalo. Raikitra avy hatrany ny fisavana ny toeram-ponenany ka tra-tehaka tao ireo odi-ratsy isan-karazany. Niaiky ny tenany nandritra ny famotorana fa mpiray tsikombakomba amin’ny andian-dahalo sy mpamatsy fitaovam-pamosaviana ireo dahalo, mba hahafahan’izy ireo manatanteraka ny asa ratsiny. Isan’ny tompon’antoka nahazoana izao vokatra izao, ireo fokonolona ao Belalanda nanampy tamin’ny fisamborana. Hentitra ny Foibem-pibaikoana ny Zandarimariam-pirenena fa hohamafisina ny atao hazalambo ireo mpimasin-dahalo mampirongatra ny asan-dahalo. Ny manaitra, mampiasa odiratsy ireo mpimasy, saingy voaporofo fa tsy maharo azy ireo akory.
Ampahany amin’ireo basy sy moara tratran’ny zandary.
Saron’ny Sampana fikarohana heloka bevava eo anivon’ny Zandarimaria ao Antsiranana, omaly tokony ho tamin’ny 11 ora antoandro ny mpimasy iray, taorian’ny fahazoana taratasy nahafaha-nisava ny tranony, tao Mangarivotra Antsiranana. Izy rahateo efa noahiahina fatratra amin’ny amin’ny fahazoan-javatra amin’ny resaka fisandohana. Taorian’ny fanadihadiana lalina, tsy maintsy nirosoana ny fisavana ny tranony. Nandritra io fotoana io, naneno tampoka ny findainy, ary nisy ny olona velon-taraina amin’ny asa fisolokiana nataony. Rehefa nosavaina ny tranony, dia nahitana ireo mohara sy ody marobe. Notanana vonjimaika ity voalaza fa mpimasy mampiasa ny asa ratsiny amin’ny asa fisolokiana ny mpiara-monina aminy.
Ny fiandohan’ny volana aogositra lasa teo, mpilalao odibala miisa 300 amin’ny distrikan’ Andilamena no nahatsiaro voafitaky ny mpimasy no nivadika ho mpiompy omby tsotra. Mpikambana tao amin’ny « Vatolampy » ireo mpilalao io odibala io, izay navadika ho fikambanan’ny mpiompy omby ankehitriny. Milaza moa izy ireo fa nahatsiaro tena ho voafitaka tamin’izany ary diso lalana ka vonona ny hiala tanteraka amin’io asa ratsy io. Nentanin’izy ireo ny namany, mba tsy ho tratran’ny fitaka bevava amin’ny fivarotana odibala, izay fitadiavam-bola fotsiny.
Manasarotra azy ny kolikoly sy ny fahavotsoran’ireo olon-dratsy
Ilay dahalo tratran’ny ZRPS kanefa votsotra.
Anisan’ny sarotra amin’ny ady atao amin’ny asan-dahalo ny fisian’ny kolikoly sy ny famotsorana ireo dahalo tratra. Matetika mantsy rehefa tratra izy ireny, atolotra ny Fitsarana ary vosotra avy eo. Antony mahatonga izany ny fisian’ny mpiaro ireo olon-dratsy, ka na ireo olona ambony, manampahefana na mpanao politika ihany koa. Manampy trotraka ny resaka kolikoly izay anisan’ny fototra mahatonga izany rehetra izany. Endrika iray nisehoan’izany izao ity tany Ambatoboeny ity. Noho ny ezaky ny miaramila ZRPS Delta Ambatoboeny, voasambotra ny sabotsy 29 aogositra, tao Marotaolana ilay fanta-daza amin’ny anarana hoe Dasara. Nangalatra omby 10 izy, izay efa miriaria sahady ankehitriny. Araka ny fanazavana, natolotra ny Zandary ao Ambatoboeny, ny andron’io sabotsy nahatratrana azy io ihany i Dasara. Niaiky tanteraka ny helony izy nanoloana ny miaramila, nilazany fa mpamoaka sy mpangalatra ireo omby eo an-tanàna no asany ary efa misy mpandray ny azony, any Antselika Mangabe, distrikan’i Maevatanàna. Voalaza fa faly ny vahoaka tany an-toerana tamin’ny naha tra-tehaka azy ity. Indrisy, nivadika ho horohoro sy tahotra indray izany, noho ny nahatafavoahan’io voatondro ho olon-dratsy io amin’izao fotoana izao. « Nahazo fahafahana vonjimaika mantsy izy rehefa nentina niatrika fampanoavana tany Mahajanga. Nandositra any Mahajanga ary tsy sahy miverina any Ambatoboeny ny tompon’omby sao hiharan’ny valifaty. », hoy ny fanazavana. Endrika toy izao no mahasarotra ny ady amin’ny asan-dahalo. Amin’ity tranga ity, efa olona malaza amin’ny asan-dahalo, kanefa afaka. Avy eo miverina manao ny asa ratsiny indray, ary mety hamaly faty.
Miady aman’aina ny mpitandro filaminana amin’ny asan-dahalo
Tonga nitsena ilay zandary naratra mihitsy ny Seg Jly Ravalomanana Richard.
Tsy takona afenina fa miady aman’aina ny mpitandro filaminana amin’ny ady amin’ny asan-dahalo. Firifiry izay zandary na miaramila maty vokatry ny fifandonana amin’ireo olon-dratsy ireo izao. Marihina fa zandary miisa telo no namoy ny ainy nandritra ity taona 2020 ity raha efatra no naratra teo am-panatanterahana ny asany vokatry ny fifandonana tamin’ny dahalo. Vao ny alatsinainy teo, zandary iray miasa ao amin’ny BRS Analakininina Miandrivazo Menabe no notafihan’ny dahalo mitam-piadiana tao amin’ny tanàna atao hoe Manandaza Malaimbandy. Naratra mafy vokatr’izany fanafihana izany ity zandary ity. Ireo dahalo moa rehefa avy nanao ny asa ratsiny, lasa nilefa. Ny ampitso maraina 8 septambra no novonjena tamin’ny angidimby haingana ka nentina nankatý Antananarivo mba hahazo fitsaboana sahaza ao amin’ny hopitaly miaramila Soavinandriana ilay mpitandro filaminana. Ny tomponandraikitra ambony rehetra ao amin’ny mpitandro filaminana moa no nifanome tanana tamin’izao asa fanavotana izao. Mivarotr’aina ny mpitandro filaminana amin’ny asa ataony, amin’ny fiarovana ny vahoaka sy ny fananany ka tsy mendrika raha afa-maina ireo mpanao ratsy. Ady mafy mbola atao koa ny ady amin’ny dahalo ambony latabatra manoloana izany. Miandrandra fiaraha-miasa amin’ny vahoaka arovana amin’ny alalan’ny fanomezam-baovao ny mpitandro filaminana. « Koa manentana ny vahoaka mba hanome vaovao ahafahana misambotra ireo dahalo ary tsy tokony hatahotra an’ireo dahalo amin’ny hanaovany valifaty. Ny dahalo no tokony hatahotra amin’izao fa tsy ny vahoaka intsony na ny mpitandro filaminana. », hoy ny Jly Ravalomanana Richard.
dahalo heloka bevava Jly Ravalomanana Richard mpimasy zandary